လီဗာပူးနောက်ခံလူ ဗန်ဒိုက် တိုးတက်အောင် လုပ်လို့ ရတဲ့ အရာတစ်ခုကို ချပြသွားခဲ့တဲ့ ယူနိုက်တက် ကစားသမားဟောင်း ၂ ဦး - SPORTS MYANMAR
လီဗာပူးနောက်ခံလူ ဗန်ဒိုက် တိုးတက်အောင် လုပ်လို့ ရတဲ့ အရာတစ်ခုကို ချပြသွားခဲ့တဲ့ ယူနိုက်တက် ကစားသမားဟောင်း ၂ ဦး
လီဗာပူး နောက်ခံလူ ဗာဂျယ်ဗန်ဒိုက်ဟာ တနင်္ဂနွေနေ့က မန်ချက်စတာစီးတီးကို ပင်နယ်တီ အဆုံးအဖြတ် နဲ့ ရှုံးခဲ့တဲ့ ကွန်မြူနတီဒိုင်း ပွဲစဉ်မှာ အထူး ခြေစွမ်းပြ သွားခဲ့ပါတယ်။ စီးတီးရဲ့ အစောပိုင်း သွင်းဂိုးကို ခွင့်ပြု ခဲ့ရပေမယ့်လည်း ယာဂန်ကလော့ ရဲ့ အသင်းဟာ တစ်ဖြည်းဖြည်း ကစားပုံ ကောင်းလာ ခဲ့ပြီး နယ်သာလန် ဗဟို နောက်ခံလူဟာလည်း တောက်ပခဲ့ကာ ၎င်းရဲ့ ကန်သွင်းချက် ဘားတန်းထိ ထွက်ခဲ့သလို မာတစ်ရဲ့ ချေပဂိုးအတွက်လည်း ဖန်တီးပေး နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ပွဲအပြီး သုံးသပ်ချက် မှာတော့ BT Sports ရဲ့ အစီအစဉ် တင်ဆက်သူတွေ အဖြစ် လုပ်ကိုင် နေတဲ့ ယူနိုက်တက် ကစားသမားဟောင်းတွေ ဖြစ်တဲ့ ရီယိုဖာဒီနန် နဲ့ ရော်ဘင်ဗန်ပါစီ တို့ဟာ ဗန်ဒိုက်ကို အကောင်းဆုံးလို့ ချီးကျူးလိုက်ပြီး လီဗာပူး နောက်ခံလူ အနေနဲ့ ဒီထက် ပိုကောင်းအောင် ဘယ်လို လုပ်နိုင်သလဲ ဆိုတာ ဆွေးနွေး သွားခဲ့ ပါတယ်။
လီဗာပူး နဲ့ အတူ ၂၀၁၃ မှာ ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလား ဆွတ်ခူး နိုင်ခဲ့တဲ့ ဗန်ပါစီက “ဗန်ဒိုက်ဟာ တကယ့် ထိပ်တန်း ကစားသမား တစ်ဦး ဆိုတာ သူ့ကိုယ်သူ ပြသနိုင်ခဲ့ ပါတယ်။ သူဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ပိုင်းအတွင်း ဆဲတစ် ၊ ဆောက်သမ်တန် တို့လို အသင်းသေးတွေ ကနေ အခုချိန်မှာ လီဗာပူး ၊ ဟော်လန် ရဲ့ အသင်းခေါင်းဆောင် ဖြစ်နေပါပြီ။ သူဟာ ဒါတွေနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ အရည်အသွေး အားလုံးကို ပိုင်ဆိုင် ထားတယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သူ ဘောလုံး ရှိတဲ့ဆီကို တက်ပြီး ကာကွယ်မှုတွေ စတင် လုပ်သွားမယ် ဆိုရင် အခုထက် ၁၀% လောက် ပိုကောင်း သွားမယ်လို့ ခင်ဗျား ထင်သလား ?
အင်္ဂလန် လက်ရွေးစင် နောက်ခံလူဟောင်း ဖာဒီနန် က “ဘောလုံး ကိုင်ကစားမှုပိုင်းမှာ သူ့ရဲ့ အရည်အသွေး ပိုမို ထွက်ပေါ် လာမယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။ သူဟာ ဘောလုံး ကိုင်ကစား ရမှာ အရမ်းကို သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်ပြီး ကောင်းလွန်း ပါတယ်။ သူဟာ ကိုက် ၃၀-၄၀ အကွာကို တိတိကျကျ ပေးနိုင်တဲ့ အရည်အသွေး ပိုင်ဆိုင် ထားပါတယ်။
အကယ်၍ သူ ဒီအရည်အသွေးကို ပွဲအတွင်းမှာ ဒီထက် ပိုမို ထုတ်ပြ နိုင်မယ် ဆိုရင် သူဟာ အခြား နောက်ခံလူတွေထက် ဒီထက် အများကြီး ပိုသာ သွားမှာပါ။ ကျွန်တော် ကတော့ သူဟာ ဒီအချိန်မှာ အကောင်းဆုံး လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူဟာ ဒီလို သေးငယ်တဲ့ အရာလေးတွေကို ထပ်မံ ပေါင်းထည့် နိုင်မယ် ဆိုရင် သူဟာ အခြားလူတွေနဲ့ လုံးဝ ကွဲထွက် သွားမယ်လို့ ကျွန်တော် ယူဆ ပါတယ်။” လို့ ပြောသွား ပါတယ်။
လီဗာပူး ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီက ချန်ပီယံလိဂ် ဖလား ဆွတ်ခူး နိုင်ခဲ့တဲ့ အပြင် ပရီးမီးယားလိဂ် မှာလည်း ကလပ် စံချိန်တင် ရမှတ် ရယူ နိုင်ခဲ့တာကြောင့် နယ်သာလန် ဗဟို နောက်ခံလူဟာ လက်ရှိ အချိန်မှာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး နောက်ခံလူတွေ ထဲက တစ်ဦး အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း ခံထား ရပါတယ်။
ဗန်ဒိုက်ဟာ လက်ရှိ အချိန်မှာ ဘလွန်းဒီအောဆု အတွက် အထူး ရေပန်း စားနေသူ ဖြစ်ပြီး အကယ်၍ ဒီဆုသာ ရရှိ ခဲ့မယ် ဆိုရင် အသက် ၂၈ နှစ် အရွယ် ကစားသမားဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၆ ခုနှစ်က အီတလီ ဂန္တ၀င် ဖေဘီယို ကန်နဗာရို နောက်ပိုင်း ဒီဆု ကို ရယူ နိုင်ခဲ့တဲ့ ပထမဦးဆုံး နောက်ခံလူ ဖြစ်လာမှာပါ။
လီဗာပူးနောကျခံလူ ဗနျဒိုကျ တိုးတကျအောငျ လုပျလို့ ရတဲ့ အရာတဈခုကို ခပြွသှားခဲ့တဲ့ ယူနျိုကျတကျ ကစားသမားဟောငျး ၂ ဦး
လီဗာပူး နောကျခံလူ ဗာဂယျြဗနျဒိုကျဟာ တနင်ျဂနှနေကေ့ မနျခကျြစတာစီးတီးကို ပငျနယျတီ အဆုံးအဖွတျ နဲ့ ရှုံးခဲ့တဲ့ ကှနျမွူနတီဒိုငျး ပှဲစဉျမှာ အထူး ခွစှေမျးပွ သှားခဲ့ပါတယျ။ စီးတီးရဲ့ အစောပိုငျး သှငျးဂိုးကို ခှငျ့ပွု ခဲ့ရပမေယျ့လညျး ယာဂနျကလော့ ရဲ့ အသငျးဟာ တဈဖွညျးဖွညျး ကစားပုံ ကောငျးလာ ခဲ့ပွီး နယျသာလနျ ဗဟို နောကျခံလူဟာလညျး တောကျပခဲ့ကာ ၎င်းငျးရဲ့ ကနျသှငျးခကျြ ဘားတနျးထိ ထှကျခဲ့သလို မာတဈရဲ့ ခပြေဂိုးအတှကျလညျး ဖနျတီးပေး နိုငျခဲ့ပါတယျ။
ပှဲအပွီး သုံးသပျခကျြ မှာတော့ BT Sports ရဲ့ အစီအစဉျ တငျဆကျသူတှေ အဖွဈ လုပျကိုငျ နတေဲ့ ယူနိုကျတကျ ကစားသမားဟောငျးတှေ ဖွဈတဲ့ ရီယိုဖာဒီနနျ နဲ့ ရျောဘငျဗနျပါစီ တို့ဟာ ဗနျဒိုကျကို အကောငျးဆုံးလို့ ခြီးကြူးလိုကျပွီး လီဗာပူး နောကျခံလူ အနနေဲ့ ဒီထကျ ပိုကောငျးအောငျ ဘယျလို လုပျနိုငျသလဲ ဆိုတာ ဆှေးနှေး သှားခဲ့ ပါတယျ။
လီဗာပူး နဲ့ အတူ ၂၀၁၃ မှာ ပရီးမီးယားလိဂျ ဖလား ဆှတျခူး နိုငျခဲ့တဲ့ ဗနျပါစီက “ဗနျဒိုကျဟာ တကယျ့ ထိပျတနျး ကစားသမား တဈဦး ဆိုတာ သူ့ကိုယျသူ ပွသနိုငျခဲ့ ပါတယျ။ သူဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ နှဈပိုငျးအတှငျး ဆဲတဈ ၊ ဆောကျသမျတနျ တို့လို အသငျးသေးတှေ ကနေ အခုခြိနျမှာ လီဗာပူး ၊ ဟျောလနျ ရဲ့ အသငျးခေါငျးဆောငျ ဖွဈနပေါပွီ။ သူဟာ ဒါတှနေဲ့ ထိုကျတနျတဲ့ အရညျအသှေး အားလုံးကို ပိုငျဆျိုငျ ထားတယျလို့ ကြှနျတျော ထငျပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ သူ ဘောလုံး ရှိတဲ့ဆီကို တကျပွီး ကာကှယျမှုတှေ စတငျ လုပျသှားမယျ ဆိုရငျ အခုထကျ ၁၀% လောကျ ပိုကောငျး သှားမယျလို့ ခငျဗြား ထငျသလား ?
အင်ျဂလနျ လကျရှေးစငျ နောကျခံလူဟောငျး ဖာဒီနနျ က “ဘောလုံး ကိုငျကစားမှုပိုငျးမှာ သူ့ရဲ့ အရညျအသှေး ပိုမို ထှကျပျေါ လာမယျလို့ ကြှနျတျော ထငျပါတယျ။ သူဟာ ဘောလုံး ကိုငျကစား ရမှာ အရမျးကို သကျတောငျ့သကျသာ ဖွဈပွီး ကောငျးလှနျး ပါတယျ။ သူဟာ ကိုကျ ၃၀-၄၀ အကှာကို တိတိကကြ ပေးနိုငျတဲ့ အရညျအသှေး ပိုငျဆျိုငျ ထားပါတယျ။
အကယျ၍ သူ ဒီအရညျအသှေးကို ပှဲအတှငျးမှာ ဒီထကျ ပိုမို ထုတျပွ နျိုငျမယျ ဆိုရငျ သူဟာ အခွား နောကျခံလူတှထေကျ ဒီထကျ အမြားကွီး ပိုသာ သှားမှာပါ။ ကြှနျတျော ကတော့ သူဟာ ဒီအခြိနျမှာ အကောငျးဆုံး လို့ ထငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူဟာ ဒီလို သေးငယျတဲ့ အရာလေးတှကေို ထပျမံ ပေါငျးထညျ့ နိုငျမယျ ဆိုရငျ သူဟာ အခွားလူတှနေဲ့ လုံးဝ ကှဲထှကျ သှားမယျလို့ ကြှနျတျော ယူဆ ပါတယျ။” လို့ ပွောသှား ပါတယျ။
လီဗာပူး ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီက ခနျြပီယံလိဂျ ဖလား ဆှတျခူး နိုငျခဲ့တဲ့ အပွငျ ပရီးမီးယားလိဂျ မှာလညျး ကလပျ စံခြိနျတငျ ရမှတျ ရယူ နိုငျခဲ့တာကွောငျ့ နယျသာလနျ ဗဟို နောကျခံလူဟာ လကျရှိ အခြိနျမှာ ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံး နောကျခံလူတှေ ထဲက တဈဦး အဖွဈ သတျမှတျခွငျး ခံထား ရပါတယျ။
ဗနျဒျိုကျဟာ လကျရှိ အခြိနျမှာ ဘလှနျးဒီအောဆု အတှကျ အထူး ရပေနျး စားနသေူ ဖွဈပွီး အကယျ၍ ဒီဆုသာ ရရှိ ခဲ့မယျ ဆိုရငျ အသကျ ၂၈ နှဈ အရှယျ ကစားသမားဟာ လှနျခဲ့တဲ့ ၂၀၀၆ ခုနှဈက အီတလီ ဂန်တဝငျ ဖဘေီယို ကနျနဗာရို နောကျပိုငျး ဒီဆု ကို ရယူ နိုငျခဲ့တဲ့ ပထမဦးဆုံး နောကျခံလူ ဖွဈလာမှာပါ။